रजस्वला सुक्ने बेलामा यी यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्,यस्ता लक्षण देखिए खतरा हुन्छ ! «
रजस्वला सामान्य र नियमित प्रक्रिया भए पनि यसलाई हेर्ने दृष्टि भने फरक फरक छ । विशेष गरेर रजस्वला सुक्ने समयमा महिलाहरु स्वास्थ्य प्रति बढि सचेत हुनुपर्छ ।
यस अवस्थाका कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ? स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोजी वैद्य मल्लका सुझाव:
यस अबस्थामा यस्ता लक्षण देखिए खतराको संकेत:
५. रजस्वलाको समयमा तल्लो पेट अत्याधिक दुख्नु । यस्ता लक्षण देखिँदा पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ । त्यसकारण यस्ता कुनै पनि लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्छ । समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गरायो भने सम्भावित खतराबाट जोगिन सकिन्छ ।
(स्रोत: हाम्रो डाक्टर)